Promotion: The Thingyan Festival ﻿
Promotion: The Thingyan Festival
Tags: job work hot job career jobs in yangon job in myanmar good job jobless Thingyan festival prom
1. CV Package Promotion
Purchase any package until 30.4.2015 from our offers and enjoy the 25% discount from Regular Price* and extra 30 days of the validity days ( Eg :Regular Package 500 000 for 375 000 Kyats , validity date : regular3months, Promotion Period :4months instead of3months) to have time to relax during the Thingyan Festival…
Regular price is Officialy publish Online price at www.jobless.com.mm. Promotion terms and conditions are applicable only if the effected payment is within the Promotion period only.
2. Short list/Executive search Promotion
Any order for vacancies from 18th of March until 30th of April 2015 will be charged as 2+1 for FREE = Pay for 2vacancies and get 1vacancy for Free**
* *Terms and condition apply:
**The cheapest Vacancies will be for free. This Unique Promotion is applicable per each Registered company once only during the promotion. Promotion terms and conditions are applicable only if the Vacancies order is sign within the Promotion period only. This promotion terms are applicable only for newly sign Vacancies and the terms and conditions can not be applicable for existing Vacancies.
Thanks, best regards and enjoy the Thingyan Festival,
ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်အစီအစဉ်အတွက် Jobless.com.mm မှ လူကြီးမင်းတို့အတွက် အထူး promotion အစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါသည်။ အစီအစဉ်များမှာ
၁။ Package Promotion
၃၀.၄.၂၀၁၅ အထိ ကျွန်ုပ်တို့၏ မည်သည့် Package ကို မဆို ဝယ်ယူပါက ၂၅% Discount ပေးမည်ဖြစ်ပြီး
လက်ရှိသတ်မှတ်သော အချိန်ကာလထက် ရက်၃၀ ထပ်အပိုဆောင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
( ဥပမာ- Package 500 000 - သတ်မှတ်ကာလ : ၃ လ ( Promotion Period : Package 375 000 သတ်မှတ်ကာလ-၄ လ) ဖြစ်ပါသည်။
* စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ချက် အကျုံးဝင်မှု
* ပုံမှန်ဈေးနှုန်းများကို www.jobless.com.mm တွင် တရားဝင်ဖော်ပြထားပါသည်။ Promotion စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်းပေးချေသော payment အတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
၂။ Short List/Executive Search Promotion
18.3.15 မှ 30.4.15 အထိ Short List Order မှာယူသည့် လူကြီးမင်းများကို 2+1 FOR FEEE (ဥပမာ- ဝန်ထမ်း ၃ ယောက် ခန့်လျှင် ၂ ယောက်စာသာယူမည့် promotion) ကို ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။
** စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ချက် အကျုံးဝင်မှု
** လခနည်းသော ရာထူးများအတွက်သာ အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ယခုပြုလုပ်သော promotion သည် ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်းတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။
Promotion စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ၄င်းကာလအတွင်း ပြုလုပ်သော promotion တွင် သဘောတူမှာယူသော vacancies order အတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
သေးစိတ်ကို ဒီမှာ ကြည့်ပါ (သို့ ) ၂၃၀၆၁၀၃ သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပါ။
ရိုသေလေးစားခြင်းများစွာဖြင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်ကူးသင်္ကြန်တွင် ကျန်းမာချမ်းသာစေရန် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိ်ုက်ပါသည်။